Hankasitrahanao ve ny Vidim-panavotana, Ilay Fanomezana Tena Sarobidy?
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mongol Mooré Myama Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Samoanina Sango Saramaccan Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa tzeltal Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA | HORAISINAO VE ILAY FANOMEZANA SAROBIDY NOMEN’ANDRIAMANITRA?
Hankasitrahanao ve Ilay Fanomezana Faran’izay Sarobidy?
“Ny fitiavan’i Kristy no manery anay ... Maty ho an’ny rehetra izy, mba tsy ho velona ho an’ny tenany intsony izay velona, fa ho an’ilay efa maty ho azy ireo.”​—2 Korintianina 5:14, 15.
TOKONY hahay hankasitraka isika rehefa mahazo fanomezana tsara be. Izany no nasongadin’i Jesosy rehefa avy nanasitrana folo lahy voan’ny aretina tsy nisy fanafany izy. “Niverina” ny iray, “ka nanome voninahitra an’Andriamanitra tamin’ny feo avo.” Hoy i Jesosy: “Tsy efa voadio daholo moa izy folo? Fa aiza ny sivy?” (Lioka 17:12-17) Hita amin’izany fa mora manadino ny soa atao aminy ny olona!
Fanomezana tsy manan-tsahala ny vidim-panavotana. Tsy misy fanomezana sarobidy kokoa noho io. Ahoana àry no ampisehoanao fa mankasitraka azy io ianao?
Fantaro ilay nanome azy. Tsy tonga dia hahazo fiainana mandrakizay daholo ny olona, na dia nanome ny vidim-panavotana aza Andriamanitra. Nivavaka mantsy i Jesosy hoe: “Mba hahazoan’izy ireo fiainana mandrakizay, dia ilainy ny mianatra hahalala anao, ilay hany tena Andriamanitra, sy Jesosy Kristy, ilay nirahinao.” (Jaona 17:3) Aoka hatao hoe nisy olona namonjy anao tsy ho faty tamin’ianao mbola kely. Tsy ho tianao ve ny hahalala bebe kokoa azy sy ny antony namonjeny anao? Nanome ny vidim-panavotana i Jehovah mba hamonjena antsika, ary tiany ianao hahalala azy sy hifandray akaiky aminy. Hoy ny Baiboly: “Manatòna an’Andriamanitra, dia hanatona anareo izy.”​—Jakoba 4:8.
Manehoa finoana ny vidim-panavotana. “Izay maneho finoana ny Zanaka dia manana fiainana mandrakizay.” (Jaona 3:36) Mila aseho amin’ny atao ny finoana. Mila manao zavatra àry ianao raha tena mino ny vidim-panavotana. (Jakoba 2:17) Inona no tokony hataonao? Mila manaiky handray an’izay fanomezana omena anao ianao, vao ho lasanao ilay izy. Izany koa no tokony hataonao amin’ny vidim-panavotana. Amin’ny fomba ahoana? Fantaro hoe hoatran’ny ahoana ny fomba fiaina tian’Andriamanitra, dia araho izany. * Mivavaha mba hamelany ny helokao sy hanananao feon’ny fieritreretana madio. Ho sambatra sy hiadana mandrakizay ianao raha maneho finoana ny vidim-panavotana.​—Hebreo 11:1.
Atreho ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Jesosy. Tsy tian’i Jesosy hanadino ny nanomezana ny vidim-panavotana isika, ka nanao fankalazana vaovao izy. Hoy izy: “Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana ahy.” (Lioka 22:19) Tokony hatao isan-taona àry izy io. Hahatsiaro ny nahafatesan’i Jesosy ny Vavolombelon’i Jehovah ny talata 11 Aprily 2017, aorian’ny filentehan’ny masoandro. Haharitra adiny iray eo ho eo ilay fandaharana. Hisy lahateny hanazava hoe nahoana no zava-dehibe ny nahafatesan’i Jesosy, ary inona ny soa entin’izany dieny izao sy amin’ny hoavy. Nisy 20 tapitrisa teo ho eo eran-tany no nanatrika ny Fahatsiarovana tamin’ny taon-dasa. Asainay ianao hanatrika azy io, ho fankasitrahana an’ilay fanomezana faran’izay sarobidy nomen’Andriamanitra.
^ feh. 7 Ny fianarana Baiboly no fomba tsara indrindra ahalalana an’Andriamanitra sy anatonana azy. Anontanio an’ireo Vavolombelon’i Jehovah ny fomba anaovana an’izany, na tsidiho ny tranonkalanay www.jw.org/mg.
Hizara Hizara Hankasitrahanao ve Ilay Fanomezana Faran’izay Sarobidy?